I-Southwest Airlines ayizukugxotha abasebenzi bayo abalinde ukukhululwa kwisitofu
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Southwest Airlines ayizukugxotha abasebenzi bayo abalinde ukukhululwa kwisitofu
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-Southwest Airlines ayizukugxotha abasebenzi bayo abalinde ukukhululwa kwisitofu.
Njengekhontraktha yomanyano, uMzantsi-ntshona weAirlines wayecwangcise ngaphambili ukubeka bonke abasebenzi abangagunyaziswanga ababengekafumani uxolelo kwezonyango okanye kwezenkolo ngoDisemba 8 kwikhefu elingahlawulelwayo.
Imemo iqinisekisa abasebenzi ukuba banokuqhubeka nokusebenza ukuba uxolelo alukamkelwa.
Endaweni yekhefu elingahlawulelwayo, abasebenzi base Mzantsi-ntshona abalinde isigwebo baya kuqhubeka nokufumana umvuzo.
Ukuba ukukhululwa kwabo kuyaliwa, abasebenzi banokuphinda bafake izicelo ukuba banolwazi olutsha okanye iimeko.
Abasebenzi beenqwelomoya beeSouthwest abanyanzelwanga ukuba bathathe ikhefu elingahlawulelwayo ngelixa besenza izicelo zokuxolelwa kwigunya lokugonya le-COVID-19.
Ukulandela iveki yoqhanqalazo, ukukhanyela kunye nokurhoxiswa kweenqwelomoya, inqwelomoya ibuyisile ikhosi kwisigunyaziso sayo sokugonya abasebenzi.
Southwest Airlines Abasayi kuphinda banyanzele abasebenzi abalinde isigqibo malunga nokuxolelwa ngokwenkolo okanye kwezonyango kumyalelo wokugonya onyanzelekileyo wokuthatha ikhefu elingahlawulelwayo de kube kugqitywe amatyala abo, ngokwememo efunyenwe ziinkonzo zeendaba namhlanje.
Umzantsi-ntshona uqinisekisile ubunyani bememo, enika abasebenzi kude kube ngu-Novemba 24 ukuba bagonywe okanye bafake isicelo sokuxolelwa.
Endaweni yekhefu elingahlawulelwayo, abasebenzi abalinde isigwebo kwizaphulelo zabo baya kuqhubeka nokufumana umvuzo kwaye banokuqhubeka nokusebenza "njengoko [uMzantsi-ntshona] ulungelelanisa [s] nabo ekufezekiseni iimfuno (isitofu okanye indawo yokuhlala efanelekileyo)," kuchaza inqaku.
Ibhalwe ngusekela Mongameli omkhulu wezokusebenza kunye nokubuka iindwendwe uSteve Goldberg kunye nosekela Mongameli kunye negosa labantu eliyintloko uJulie Weber, iyaqinisekisa abasebenzi ukuba bangaqhubeka nokusebenza ukuba ukukhululwa kwabo akukaphunyezwa ixesha elide belandela imigaqo yokugquma kunye neyokuphazamisa intlalo, kwaye Bathembisa ukuba abasebenzi banokuphinda bafake isicelo ukuba ukukhululwa kwabo kuyaliwa.
Ukukhululwa kwememo kuza emva kweentsuku zokuqhankqalaza ngaphandle kwekomkhulu lase-Dallas loMzantsi-mpuma kunye namahemuhemu okugula phakathi kwabalawuli bezithuthi zomoya kunye nabanye abasebenzi. Umzantsi-ntshona wanyanzelwa ukuba arhoxise amawaka eenqwelomoya kule veki iphelileyo- ngaphezulu kwe-1,000 XNUMX ngeCawa kuphela- nangona ingavumi ukuvuma into ebangela ukurhoxiswa, kwiimeko ezininzi isola imozulu nangona isibhakabhaka sicacile kwaye sinelanga. Izikhululo zeenqwelo moya zaye zangxolwa ngabakhweli abanomsindo njengoko abo babeza kuba ngabahambi bafika bezokufumana iinqwelomoya zabo zirhoxisiwe ngokungummangaliso.
Njengokontraka wobumbano, Southwest Airlines wayecwangcise ngaphambili ukubeka bonke abasebenzi abangagonywanga ababengekafumani uxolelo kwezonyango okanye kwezenkolo nge-8 kaDisemba ngekhefu elingahlawulelwayo.
Ngokungafaniyo nabathwali abancinci, phantsi kwegunya likamongameli ayinakho ukhetho lokuvumela abasebenzi ukuba bangenise kuvavanyo lweveki nganye. Ukususela ngeveki ephelileyo, abasebenzi abangama-56,000 baseMzantsi-ntshona bebengayikuthatha.
Ukhuphiswano lwe-United Airlines lo Mzantsi-ntshona lwamkele igunya lokugonya ngo-Agasti, ngaphambi kokuba uBiden ade abhengeze umthetho wobumbano, kwaye waboyikisa ngokungathobeliyo ikhefu elingahlawulelwayo. Nangona kunjalo, ijaji yomdibaniso e-Fort Worth iye yathintela i-airline okwethutyana ukuba iqhubele phambili nesohlwayo. Bamalunga nama-90% abasebenzi benkampani ekuthiwa bagonyiwe.
Kwangoko kule nyanga, abanye abathwali baseMelika American Airlines, Alaska Airlines, kwaye iJetBlue ikwamkele igunya lokugonya lomdibaniselwano, kuba zithathwa njengeekhontraktha zomdibaniso kwaye ngenxa yoko azifanelekanga ukuphuma kwijab.